Boky famolavolana sary mety 100 ho an'ireo fialantsasatra ireo | Famoronana an-tserasera
Betsaka amintsika no tsy manana fotoana tiantsika hamakiana. Tsy fantatro ny momba anao, fa manana lisitr'ireo boky miandry aho mandritra ny fotoana maharitra ary isaky ny mihabe io lisitra io, dia nanapa-kevitra aho fa hanararaotra ity fialantsasatry ny paska ity hihaona amin'ireo tanjona kendrena miandry. Ny boky dia mety ho safidy mety indrindra hahazoana sitrana amin'ny vanim-potoana izay nanjakan'ny adin-tsaina sy ny asa fatra lehibe indrindra.
Azontsika atao ny mahita boky voafantina tsara amin'ny Internet izay tena manazava sy manome aingam-panahy, ary koa ireo boky ara-teknika hafa. Hiankina amin'ny fikasanao ny safidy, ka androany aho nanapa-kevitra ny hizara aminareo safidy tsy dia lehibe ary tsy latsaky ny 100 ny kopia natokana ho an'ny tontolon'ny sary, sary, sary, typografia ary famoronana editorial. Anisan'ireo lohateny mahaliana indrindra tafiditra amin'ity fisafidianana ity dia tiako ny manasongadina: ny fahaizan'ny dokam-barotra sy ny endrika fifandraisana vaovao (ML Pinar Selva), ny famolavolana ny maso (Joan Costa), ny Designpedia (Juan Gasca), ny Audiovisual Design (Antoni Colomer)) na Aza mino ny teny iray (David Crow), ary koa ny maro hafa avy amin'ny University of London izay tena matotra sy marina. Ireo boky rehetra ireo dia azo alaina maimaimpoana sy amin'ny endrika nomerika, ka ampirisihina mafy ianao hijery raha mieritreritra ny hahazo fahalalana vaovao momba ny asanao sy mitady fotoana fialan-tsasatra sy fisaintsainana mandritra ireo fialantsasatra ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Boky famolavolana sary 100 mety tsara amin'ireo fialantsasatra ireo